लकडाउनसँगै क्‍वारेन्टाइनको समय पनि थप « Chhahara Online
लकडाउनसँगै क्‍वारेन्टाइनको समय पनि थप
२४ चैत । सरकारले कोरोना भाइरस नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउन क्‍वारेन्टाइन बसाइ लम्ब्याउने तयारी गरेको छ। जारी लकडाउनलाई दोस्रो पटक थप्दै वैशाख ३ सम्म पुर्‍याएलगत्तै मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले क्‍वारेन्टाइन बसाइ पनि लम्ब्याउने निर्णय गरेको हो।
अहिले विदेशबाट आउने र नेपालमा बसेका सम्भावित कोरोना संक्रमितलाई सरकारले अहिले १४ दिनसम्म क्‍वारेन्टाइनमा राख्ने गरेको छ। तर यसलाई पनि लम्ब्याएर कम्तीमा २१ दिन पुर्‍याइएको हो। अब १४ दिन क्‍वारेन्टाइनमा बसेपछि निस्किएका व्यक्तिले थप सात दिन होम क्‍वारेन्टाइनमा बस्‍नुपर्नेछ। सरकारका प्रवक्ता डा. युवराज खतिवडाले १४ दिन क्‍वारेन्टाइनमा बसेपछि थप सात दिन अनिवार्य होम क्‍वारेन्टाइनमा बस्‍नुपर्ने नियम ल्याइएको जानकारी दिए। उनले होम क्‍वारेन्टाइनमा बस्‍नेको अनुगमन स्थानीय तहले गर्ने पनि जानकारी दिए।
कोरोना भाइरस नेपालमा पनि दोस्रो चरणमा पुगेसँगै सरकारले सजगता अपनाउँदै अझै कडा नियम लागू गरेको हो। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. विकास देवकोटाले क्‍वारेन्टाइन बसाइलाई १४ दिनबाट बढाएर २१ दिन पुर्‍याइएको जानकारी सोमबार दिएका छन्।